1x3 Ny Latabatra Kafe - Famolavolana
Ny Latabatra Kafe
Ny Latabatra Kafe 1x3 dia aingam-panahy amin'ny alàlan'ny piozila amin'ny burr piozila. Izy io dia roa - fanaka fanaka sy fanetsiketsehana aretin-doha. Miara-miasa daholo ny faritra rehetra nefa tsy mila filamatra. Ny fitsipika mifototra amin'ny fifandraisana dia misy hetsika mihetsiketsika fotsiny izay manome dingana vita amin'ny fivoriam-be ary manao 1x3 mifanaraka amin'ny fanovana matetika ny toerana. Ny haavon'ny fahasarotana dia tsy miankina amin'ny dexterity fa amin'ny fahitana ara-panahy fotsiny. Omena torolàlana raha toa ka mila fanampiana ny mpampiasa. Ny anarana - 1x3 dia fanehoana matematika izay maneho ny lojika ny rafitry ny hazo - karazana singa iray, tapa-tokana telo.
Anaran'ny tetikasa : 1x3, Anaran'ny mpamorona : Petar Zaharinov, Anaran'ny mpanjifa : PRAKTRIK.
Ny Latabatra Kafe Petar Zaharinov 1x3